Injection ကိုများအတွက် Pituitary Luteinizing ဟော်မုန်း (LH) - တရုတ် Ningbo ဒုတိယအဟော်မုန်း
Pituitarii Lutropinum Pro ကို Injectione (LH) [ဖျေါပွခကျြ] ဒီထုတ်ကုန်အေးခဲ-အခြောက်လုပ်ကွက်သို့မဟုတ်အမှုန့်အဖြူသို့မဟုတ်ပိတ်-အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ [ရာထူးအမည်နှင့်အသုံးပြုမှု] ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ pituitary follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူက follicles ၏နောက်ဆုံးရငျ့မြှင့်တင်ရန်ရင့်ကျက် follicles ၏မျိုးဥထွက်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် Corpus luteum ၏မျိုးဆက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်: 1. ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ဒီနည်းနဲ့မျိုးဥထွက်မှ follicles မြှင့်တင်, 2. အလုပ်လုပ်တဲ့ Corpus leteum ၏မျိုးဆက်မြှင့်တင်, 3. ရောဂါကုထုံးမျိုးဥထွက် ...
Pituitarii Lutropinum Pro ကို Injectione (LH)
ဟော်မုန်းမူးယစ်ဆေး။ pituitary follicles-လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူက follicles ၏နောက်ဆုံးရငျ့မြှင့်တင်ရန်ရင့်ကျက် follicles ၏မျိုးဥထွက်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် Corpus luteum ၏မျိုးဆက်သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်: 1. ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ဒီနည်းနဲ့မျိုးဥထွက်မှ follicles မြှင့်တင်,
2. အလုပ်လုပ်တဲ့ Corpus leteum ၏မျိုးဆက်မြှင့်တင်,
3. ရောဂါကုထုံးမျိုးဥထွက်ပျက်ကွက် (follicles ၏ဆင်းရဲသားကိုရင့်ကျက်; နှောင့်နှေးမျိုးဥထွက်);
Corpus luteum ၏ hypoplasia ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သန္ဓေသား၏ 4. ရောဂါကုထုံးစောပိုငျးအသေခံခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ;
5. ရောဂါကုထုံးဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ် oestrum နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုတိရစ္ဆာန်များ၏မျိုးဆက်များပြန်လုပ်;
6. ရောဂါကုထုံး follicles cyst;
အနိမ့်လိင် drive ကိုနိမ့်သုတ်ရည်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်လျော့နည်းသုက်ပိုးနှင့်အတူ 7. ရောဂါကုထုံးအထီးတိရိစ္ဆာန်များ။
ဗြဲတစ်ဦး ၏ pplication ကို C attle မျိုးပွား
စာရေးကိရိယာသားအိမ် function ကို၏ 1. ကုသမှု: FSH ပေါင်း LH ၏ 100IU ၏ 200IU ၏အသားထိုးဆေး, ဒါကြောင့်ထိရောက်မှုလျှင်ဆေးထိုးတစ်ချိန်ကထပ်ခါတလဲလဲရလိမ့်မည်။
မျိုးဥထွက်၏ 2. induction: မိတ်လိုက်မတိုင်မီမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာစဉ်အတွင်း LH ၏ 200-300IU ၏အသားထိုးဆေးမျိုးဥထွက်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ကိုယ်ဝန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
မျိုးဥထွက်၏ 3. ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း: estrus ထပ်တူနဲ့ကုသခံရပြီးနောက်အမျိုးသမီးတိရစ္ဆာန်များ၏ estrus စဉ်အတွင်း LH ၏ 200IU ၏အသားထိုးဆေးနောက်ထပ်မျိုးဥထွက်၏ထပ်တူမြှင့်တင်ရန်နှင့် estrus ထပ်တူပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
4. စူပါမျိုးဥထွက်: LH 72 စူပါမျိုးဥထွက်ကုသမှုပြီးနောက်နာရီ follicles ၏ရငျ့နှင့်မျိုးဥထွက်မြှင့်တင်ရန်နှင့်စူပါမျိုးဥထွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်၏ 200IU ၏အသားထိုးဆေး။
5. ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျကာကွယ်ခြင်း: အတုသုက်ပြီးနောက် LH ရက်ပေါင်းများစွာ၏ 200IU ၏အသားထိုးဆေး, 2-3 ရက်ဆက်တိုက်စဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်ချုပ်မှု။
II ကို။ အခြားသူများက
LH 72 စူပါမျိုးဥထွက်ကုသမှုပြီးနောက်နာရီ follicles ၏ရငျ့နှင့်မျိုးဥထွက်မြှင့်တင်ရန်နှင့်မျိုးဥထွက်ကိုက်ညှိထားသောဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၏ 100-200IU ၏အသားဆေးထိုး: 1. သိုးအပေါ်စူပါမျိုးဥထွက် effect ကို Enhance ။
စဉ်အတွင်းသို့မဟုတ် 2-3 ရက်ဆက်တိုက်အဖော်ရှာပြီးနောက်သိုးများအတွက် LH ၏ 50-100IU ၏ 2. အသားထိုးဆေးအစောပိုင်းသေခြင်းတရားသို့မဟုတ် Corpus luteum ၏ hypoplasia ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သန္ဓေသား၏လေ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
စသည်တို့ကိုအနိမ့်လိင် drive ကို, ဆင်းရဲသားကိုသုတ်ရည်အရည်အသွေး, cryptorchidism နှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း, အတူ 3. ရောဂါကုထုံးအထီးတိရိစ္ဆာန်များ
ဒီထုတ်ကုန်ယေဘုယျအား Deactivate ၏အမှု၌သိုလှောင်မှုအတွက်ဖြေရှင်းချက်သို့ကိုပြင်ဆင်မထားပါ။
ဆေးထိုးသားအိမ် cyst ကုသမှုအတွက်နှစ်ဆရလိမ့်မည်။
[သက်တမ်း၏ Term] နှစ်
[Withdrawal ကာလ] အဘယ်သူမျှမပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ
ယခင်: Injection ကိုများအတွက် Pituitary follicles စိတ်ကြွဆေးဟော်မုန်း (FSH)
နောက်တစ်ခု: Posterior Pituitary Injection